Ingabe ukuthanda ukunika izipho? Kukhona neze umuntu sizophendula lo mbuzo kule negative. Uma unqume ukwenza kothandekayo noma umngane oseduze samanje yakho engabizi kodwa yokuqala, sincoma ukuthi ukufundisa kwakhe umhleli ukusetha isimo. Kuyini lokhu? Yilokhu sizoxoxa ngani kulesi sihloko.
Lena into entsha ...
Umhleli we ajabule kungenzeka konke uyakuthanda umuntu ozomthuma ukwenza isimanga futhi yini isiqiniseko luyofika Ukugunda. Ukuqoqa ke "zonke" kwelinye isipho, wasethula. Nokho, kini Kucacile yini umhleli ukusetha isimo, futhi ungakwenza kanjani lokho, sikumema ukuba isigaba okuyinhloko. Ngemva kokutadisha ke, wena wenze isiqiniseko sokuthi lolu hlobo isipho kuyasiza ngempela, kumnandi, engabizi futhi, okubaluleke kakhulu, original kakhulu.
Umhleli ukwenza ajabule ngezandla zakhe. Amathiphu Wabasaqalayo
Ngakho, ucabanga, futhi nikhumbule yonke izinto umngane wakho uthanda. Yiqiniso, lesi sipho awukwazi ukuphendula izinto ezinkulu, kodwa akudingeki ukuba. Umhleli akuyona lokugoqa ngesipho. It ukhonza njengelungu indawo lapho izoqoqwa knacks. Ngaphezu kwalokho, into ngayinye eqoqwe umhleli uzobe ephelezelwa isiginesha ezithakazelisayo ephawula ke. Yini zifakwe isipho?
Coffee! Uthando lwakhe cishe yonke into. Lungiselela ezinye izikhwama isiphuzo enongiwe, futhi kubo inothi "Ukuze kwemizwa kwaba onamileyo," noma "Musa ukulala emsebenzini."
Isigaxa ushokoledi. Lunikeza lokhu kungachazwa kanje: "Ukuze uthole injabulo ephelele," "yenza amahomoni injabulo", "Izidakamizwa injabulo".
Amavithamini e amapuleti noma uthi lokubeka imbiza. Futhi kungani kungenjalo? Ngena lokhu khona ngesimo lesingakavami kuloko ezithakazelisayo, "Ukuze ubungqabavu umzimba nomoya," noma "Ukuze impilo enhle."
Kuvulwa namalahle nensipho ngenothi "Ukuze ukuhlanzwa zangaphakathi nezangaphandle." Lokhu omunye, ngokuqinisekile, uzokubona amahlaya akho futhi ngeke bacasuke.
Napkins. Lokhu yinto encane ezihambisana incazelo enjalo "ukuthola ezimanzi nezinyembezi injabulo kanye nobuthakathaka acinene."
Notebook idayari. ungabhalisela into enjalo enjengale: "Ukuze kube lula inkumbulo" noma "Akuzona ukukhohlwa mayelana ebaluleke kakhulu ..."
I-albhamu yezithombe. Faka inothi "Ukuze lokuqoqa izikhathi elijabulisayo lokuphila."
Lena uhlu eyabonisa lezo zinto nice kancane, okungabandakanya umhleli ukusetha isimo. Wazi kangcono kunabazali umngane wakhe futhi uzokwazi sithathe lezo zinto nokuthi angajabula ukuyithola.
Indlela anganipha isipho?
Lapho zonke izingxenye isipho ziqoqwa, okubhalwa phansi noma okwe amanothi ezinyathelisiwe, cabanga ngendlela it is konke kuhlangene zibe munye. Uma zonke izinto flat, ukumangala, isipho ukuthi kungenziwa eligoqiwe zibe evamile ifolda ehhovisi. Okleyte iphepha lakhe eliqhakazile, ukuhlobisa nge stickers funny uphawu "Umhleli ukuze usethe isimo." Ngenxa yalezi zinjongo ungasebenzisa ibhokisi elincane amakhadibhodi ngesivalo. Zadekoriruyte Ukugoqa yayo iphepha, ukuhlobisa kanye isihloko yayo ngendlela echazwe ngenhla. Beka ngaphakathi bonke "Izinsiza", uvale phezulu bese tie umnsalo. Lapha futhi Umhleli ngomumo ajabule.
Master class owethulwe lapha - kungcono nje isibonelo sendlela ukuhlela lolu hlobo isipho. Wena uzoqala la imibono, ungacabanga ngendlela yabo futhi isakhiwo kanye okuqukethwe sangaphakathi umbukiso. Into esemqoka ukuthi ukumangala okunjalo kugcwalise injongo yayo eyinhloko - waphakamisa isimo umamukeli, wamnika imizwelo eyakhayo.